ဟန်ချက်ညီသောဘ၀ – Pann Satt Lann Books
Balance Wheel ဆိုတာဟာ… ဘဝဖြစ်တည်မှုတွေရဲ့ အခြင်းအရာမျိုးစုံပါဝင်တဲ့ (Wheel of Life).. ဘဝစက်ဝိုင်း… ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိ ဟန်ချက်ညီမျှမှု ရှိနေသလဲဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးနိုင်တဲ့ ကိရိယာ (Self Assessment Tool) တစ်ခုဖြစ်သလို၊ ကိုယ်တိုင် မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့ တင်ပြချက် (Visual Presentation) တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ဟန်ချက်ညီမျှမှု၊ မညီမျှမှုတွေကို ကိုယ်တိုင်ဆန်းစစ်တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ပြန်လည်ချိန်ညှိနိုင်ဖို့ (Self-Reflection လုပ်နိုင်ဖို့) Balance Wheel ဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Balance Wheel စာစုများကို အချိန်ပေးဖတ်ကြည့်ဖို့နဲ့… ကိုယ်တိုင်လည်းစဉ်းစားရင်းလိုက်ပါလုပ်ဆောင်ဖို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
မိမိရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုတွေဟာ ဟန်ချက်ညီရဲ့လားဆိုတာ သင့်ကိုယ်သင်မေးခွန်းတွေမေးပြီး ဆန်းစစ်ဖူးပါရဲ့လား? ဘဝရဲ့ ဖြစ်တည်နေထိုင်မှုတွေဟာ ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ ဖြစ်သင့်တာတွေ သာတူညီမျှမှုရှိပါရဲ့လား? သင့်ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေတွေရော အားရကျေနပ်မှု ရှိနေပါရဲ့လား? ဒီမေးခွန်းကို ယခု Balance Wheel ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးက ကူညီဖြေရှင်းပေးပြီး သင် သွားချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို အရောက်ပို့ဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်…
244 (Hard Cover)
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2022 မတ်လ၊ (ဒဿမ-ကြိမ်)
ဟန်ချက်ညီသောဘ၀ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု7ရှိပါသည်။
Phyu Sin Khaing – March 1, 2022
တစ်နေ့ချင်းတစ်ရက်ချင်းကိုတန်ဖိုးရှိအောင်အသုံးချရင်း.. ဘဝဆိုတဲ့ကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့ ဘာသာရပ်လေးတွေကိုအောင်မှတ်ရအောင်ဖြေရင်း… ဘဝကိုဟန်ချက်ညီအောင်ကြိုးစား ရှင်သန်နေပါတယ် 🍀📖♥️
မခိုင်ဆုဝေအောင် – March 3, 2022
အရမ်းကောင်းတဲ့ စာအုပ်လေးပါ ……
“ချစ်ရမဲ့သူဆိုတာ ဝေးဝေးလိုက်ရှာ နေစရာ မလိုဘူး
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပဲ ချစ်ရမှာ…..” ဆိုတဲ့ စာသားလေးဟာ
တစ်ကယ်ကို ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်ဖို့အတွက်လည်း ပြန်သတိရစေပါတယ်။စာတစ်ပိုဒ်တိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရင်း
ဘဝအတွက်အကျိူးရှိတဲ့ အကြောင်းလေးကို ရိုးရိုးရှင်ရှင်းလေး
ရေးထားလို့ ဆယ်ကျေုာ်သက်လေးတွေလည်း ဖတ်သင့်ပါတယ်